पुस्तक, कलम र पत्नी | SouryaOnline
पुस्तक, कलम र पत्नी
सौर्य अनलाइन २०६९ चैत ३ गते ३:०८ मा प्रकाशित
‘पुस्तिका लेखनी रामा परहस्तौ गते गता: । कदाचित् पुनरायाता भ्रष्टा मुष्टा सुचुम्बिता ।’ अर्थात् पुस्तक, कलम र पत्नी अरूका हातमा परेपछि फर्केर आउँदैनन् । आइहालेमा पुस्तक थोत्रिएको हुन्छ, कलम भाँचिएको हुन्छ, पत्नी अर्कैले चुम्बन गरिएकी हुन्छिन् । कसैले प्रयोग गरेको वस्तु हात थाप्नु जीवनको ठूलै अभाग हो । प्रिय पाठक, कसैले पुस्तक नमागोस् भनेर मैले यसो भनेको होइन । तगारो हाल्नैपर्ने स्थिति आइसकेको छैन । खासमा पुस्तक, कलम र पत्नीले मेरो जीवनमा विशेष अर्थ राख्छन् । म त्यो विशेष अर्थ बताउने चेष्टा गर्दै छु ।
मैले होस सम्हालेदेखि नै यी तीन वस्तु मेरो जीवनसँग अभिन्न रहे । यिनले मलाई जति अरू कसैलाई सायदै प्रभाव पारे होलान् । ‘द प्रोफेट,’ ‘दस स्पेक जराथुस्त्र’ जस्ता पुस्तक पहिलोपल्ट पढिसक्दाको आनन्द, कुनै कृति लेखिसक्दाको आत्मसन्तुष्टि वा कुनै युवतीको अँगालोमा कसिँदाको परितृप्ति; मेरो भागमा परेका खुसीहरू यिनै हुन् । म फेरि दोहोर्‍याएर भन्छु पुस्तक, कलम र पत्नीले मेरो जीवनमा बढी नै प्रभाव पारेका छन् । यो जबर्जस्त प्रभावको आकृति कस्तो हुन्छ मैले देखेको छैन । कहिलेकाहीँ मेरो मानसपटलमा एउटा अस्पष्ट आकृति बन्ने र बिलाउने गर्छ ।
प्राथमिक विद्यालयदेखि नै म पढ्नमा तेज थिएँ । शिक्षक र माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरूले मलाई गोर्खापत्र पढ्न लगाएर वा मेरी आमाले बाबालाई लेख्ने चिठीको बेहोरा बाँच्न लगाएर रमाइलो मान्थे । स्वस्ती श्री ६ श्री आगे तहाँ राज गरी बस्नुभएका श्रीमान् ज्यू …। म सानो हुँदा काँधमा चढाएर विद्यालय लैजाने/ल्याउने व्यक्तिले पछि मलाई आफ्नो स्वार्थको साधन बनाए । घरबाट मलाई उच्च शिक्षा पढ्न सहर जाने स्वीकृति दिइएन । मलाई पढ्नमा रुचि थियो तर घरमा खाना पकाउने, घाँस दाउरा खोज्न जंगल जाने बाली लगाउने वा थन्काउने जस्ता काम गरिराख्नुपथ्र्यो ।
०४६ सालताका गोप्य पुस्तकालय स्थापना गरेका अग्रजहरूप्रति म दिलैदेखि नतमस्तक छु । मेरो लागि त्यस गाउँको एउटै आकर्षण थियो — त्यही पुस्तकालय । गाउँमा मुखिया, जिम्मवलहरूको दबदबा थियो । तिनले अत्याचार गरेको देख्दा कस्तो ठाउँमा जन्मिएछु भनेर मैले आफैँलाई धिक्कार्थें । पुस्तक पढ्ने बानी बसेको हुँदा गाउँबाहिर विशाल संसार छ जहाँ शिष्टता, सभ्यता र नियमकानुनको राज्य हुन्छ भन्ने थाहा थियो ।
गाउँको विद्यालयका मेरा अधिकांश शिक्षक र अधिकांश साथीसमेत अहिले मेरो स्मृतिमा छैनन् । कतिपय सम्बन्धहरू बालुवामा लेखिएका अक्षर जस्तै हावाको एकै झोक्काले मेटाइदिँदो रहेछ । अक्सर मानिसहरू खनिज तत्वको तहमा, कोही वनस्पतीको तहमा र कोही जनावरको तहमा जीवन बिताउँछन् । मानिस हुनुको गौरव र स्वतन्त्रता तिनीहरूले कहिल्यै बोध गर्न सक्दैनन् । जगजाहेर कुरा हो —‘नरो वै शिश्नोदर: प्रयाणा:,’ मानिसहरू यौन र उदरपूर्तिका लागि बाँच्छन् ।
पुस्तकालयका केही कुरा । त्यो प्रगतिशील साहित्य पुस्तकालय थियो । चेखब, गोर्की, संग्रौला, प्रश्रित, पारिजातका पुस्तकहरू पढ्दा एउटा आशलाग्दो भविष्यको मीठो कल्पना मनमा छाउँथ्यो । साहित्यका पुस्तकले लामै समय मलाई ऊर्जा दिए । पछि दर्शनका पुस्तकले ताने । अन्तत: अध्यात्मका ग्रन्थले उद्वेलित बनाए । यी चरण पार गरेपछि अहिले अर्कै मनोदशा छ । पुस्तकको उपयोगिताको एउटा सीमा हुँदोरहेछ । पुस्तकका पनि केही डिस्कन्टेन्ट हुँदारहेछन् । कैयौं मानिस ‘एडिक्ट’ भएका देख्छु । कतिपय पढन्तेहरू ‘एक्जस्टेड चिकन’ अर्थात् फूल पारेर थाकेको पोथीजस्तै उदासउदास देख्छु । तिनलाई वास्तविक दुनियाँभन्दा पुस्तककै दुनियाँ अधिक रोमाञ्चक लागिरहेको हुन्छ, त्यतै फर्कन एउटा खुट्टा उचालिराखेका जस्ता देखिन्छन् । कोही म जत्तिको विद्वान् क्वै छैन भनी गजक्क फुलेर बसेका हुन्छन् ।
अहिले पनि मेरो कोठामा पुस्तकहरूको ठूलै भण्डार छ । मान्छेहरू पुस्तकालय नै रहेछ भन्छन् । मलाई भित्रैदेखि थाहा छ अनन्त ज्ञानको सागरको तुलनामा मसाग भएका केही हजार पुस्तकहरू पानीको थोपा बराबर पनि छैनन्, छिटो बराबर पनि छैनन् ।
अचेल जबजब म कुनै पुस्तक पढ्न थाल्छु मैले खोजी र खोजकर्ताको बीचमा दूरी बढाएँ भन्ने लाग्छ । म स्वयं नै पुस्तक हुँ, म नै त्यहाँ लेखिएका हरफहरू हुँ, म नै त्यहाँ बताइएको लक्ष्य हुँ । यदि यसो हो भने मैले मलाई नै खोज्न पुस्तक पल्टाएर मूर्ख हुने उपक्रम बारम्बार किन गरिरहन्छु ?
‘तरबारभन्दा कलम बलियो’ भन्ने विषयको वादविवाद प्रतियोगिता हुँदा कलमको पक्षमा खुबै बहस गरेको सम्झन्छु । विश्वविद्यालयमा भने युद्धले मानिसका इन्सटिङ्क्ट अर्थात् अन्तरप्रवृत्ति जगाइदिन्छ जसमा शान्तिकालमा खिया लागेको हुन्छ भन्ने पढियो । नित्सेको शक्तिको आकांक्षा विषयमा थेसिस गर्दा मानिसका रचनात्मक र ध्वंसात्मक प्रवृत्तिहरूको बारेमा चर्को बहस गर्नुपरेको थियो । त्यही ताका माओवादीहरूले तरबारको बलले राज्यसत्तालाई झुक्न बाध्य बनाए । अमेरिकाले इराकका सहरहरू बमले उडाइदियो । कलम अधिक बलियो हुन्छ भनेर अझै कतिन्जेल म झूठो विश्वासमा बाँच्ने होला ?
कलम मेरो जीविकाको साधन हो । मेरा लागि कलम नै सर्वशक्तिमान छ । (मैले आजसम्म कुनै हतियार चलाउने अभ्यास गरेको छैन ।) मेरो नामबाट केही पुस्तकहरू र सैयौंको संख्यामा आलेखहरू प्रकाशित भएका छन् । तिनले मलाई पैसा र हल्का प्रसिद्धि पनि दिएका छन् । तर, ख्वै मेरा शक्तिशाली कलमहरू ? कलमले नलेखेको जुगौँ भइसक्यो । औँलाहरू काखे कम्प्युटरका कीहरूमा कति अभ्यस्त भइसकेका छन् भने कहिलेकाहीँ दिमागभन्दा छिटो चल्छन् । कुन अक्षर कहाँ छ भन्ने कुरा चेतन दिमागलाई भन्दा जड औँलाहरूलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ ।
पुरुष भएको नाताले स्त्रीप्रति स्वाभाविक आकर्षण छ । नढाँटी भन्नुपर्दा अलिक अस्वाभाविक आकर्षण छ । यो मेरो सन्दर्भको कुरा हो । म जुन परिस्थिति र वातावरणमा हुर्कें त्यसले गर्दा यस्तो भएको हुनसक्छ । भाँडाकुटी वा गट्टा खेल्ने उमेरमा मैले र मेरी साथीले उसका बाबुआमा सम्भोग गरेको देख्थ्यौँ । एक दिन हामीले करेसाबारीमा सम्भोग गर्‍यौँ ।
आँगनमा भाँडाकुटी खेल्न छोडेर करेसाबारीमा गई झारमाथि सुतेर गरेको त्यो सम्भोग सम्झनामा कतिपल्ट दोहोर्‍याइयो हिसाब छैन । सोत्तर परेको चरीअमिलोको झार, पसिनाले निथ्रुक्क भएका, कसैले देख्ला कि भनी हतासिएका हामी दुई प्राणी । कस्तो मादक सम्झना † सम्भोग त आज पनि हुन्छन् तर त्यो बेलाको जस्तो कौतुहल छैन । उत्सुकता छैन । समर्पण छैन । छ त केवल लेनदेन छ ।
स्त्रीपुरुषबीचको आकर्षण स्वाभाविक आकर्षण हो भने किन यति गर्हित ?
‘कसैलाई माया गर्दा छोडी जान पाइन्न रे ।
उसकै लागि बाँच्नु पर्छ आफू भन्नै भ्याइन्न रे †’
म उदेक मान्छु । प्लेटोले कतै लेखेका छन्–सृष्टिको आरम्भमा लोग्ने मानिस र स्वास्नी मानिसको शरीर एउटै थियो रे । दुई टाउका, चार हात, चार खुट्टा र दुवै लिंगीका यौनांग । सन्तान जन्माउनका लागि एक्लै समर्थ थियो रे त्यो प्रथम मानिस । चार हातगोडाले काम पनि धेरै र यात्रा पनि लामै गर्न सक्ने । स्वर्गका राजा जिउसलाई ईष्र्या भएछ । आफैँमा सर्वगुण सम्पन्न भएपछि मानिसले हाम्रो आदर गर्नेछ्रैन । मानिसलाई ठाउँमा ल्याउने मसाग एउटा उपाय छ । यति भन्दै उसले भयानक चट्याङ पार्‍यो । चट्याङले मानिसको शरीर ठीक बीचबाट चोइट्यायो । पुरुष एकातिर भयो स्त्री अर्कोतिर । त्यही बेलादेखि सम्भोगका लागि स्त्रीपुरुष एकआपसमा गाँसिनुपर्ने भयो । सम्भोगको आकर्षण त्यही आधा शरीरसँग पुन: जोडिने आकांक्षा हो रे । यो यति सहज क्रिया हो भने हामीले यसलाई किन सोसल ट्याबु बनायौँ ?
पुस्तक, कलम र पत्नी यी तीन कुराले मलाई सर्वाधिक प्रभावित पारेको खुलस्त बताएँ । बताएँ कि बताइनँ म दुविधामा छु । पुस्तक मेरा लागि बाबुआमा, साथीभाइ र शिक्षक पनि हुन् । कलम मेरो निम्ति जीविका पनि हो, तरबार पनि । पत्नी मेरानिम्ति बाल्यकालमा खेलेको त्यही लुकामारी सम्झाउने माध्यम हो । तर, मनको रित्तोपन न पुस्तकले भरेको छ, न कलमले न पत्नीले । मन भरिँदैन । यत्ति थाहा पाऊन् उफ् ! मलाई कति समय लाग्यो ?